"Mascotte" - i brand English ukuthi ukwenza ngaphandle ukukhiqizwa nezicathulo ngoba amadoda nabesifazane isitayela ukuthi liseduze kakhulu isiqondiso classical. Ngaphandle fashion izicathulo ngazimbili, sha uye ezikhethekileko ekwenzeni izinsimbi ezahlukene. Ekuthuthukiseni Mascotte nezicathulo isebenzisa kuphela okuqotho noboya, kanye ukufakwa isikhumba izilwane zakwamanye amazwe. Izesekeli brand yenziwa of high quality lesikhumba yokufakelwa, elula impahla nensimbi.
idatha zomlando mayelana sha
"Mascotte" - inkampani ivuliwe emhlabeni fashion emakethe ingenye omdala. phansi ilebula ngenkathi izinsuku kusukela 1889. abasunguli Inkampani babe Richard Elimhlophe - usomabhizinisi e-United Kingdom. At ekuqaleni ukhona Mascotte kwaba izicathulo salon encane kanye izesekeli abantu abacebile. Kodwa eminyakeni eyikhulu kamuva sha kakhulu washintsha prerogatives yayo futhi ngokuqinile egxilile yamafeshini kuwo wonke umhlaba umkhakha.
Ngaphambi 1995, "Mascotte" - kwaba izicathulo, ukuthenga abakwazi ukukhokhela kuphela umuntu abakhethiwe. Yathela kuphela eziningi limited futhi kuphela oda angawodwana. Kusukela ngo-1996 kuphela, i-trade mark iqala indaba yakhe yamanje. Ngalesi sikhathi, inkampani M.Studio ozuza wonke amalungelo ukusebenzisa lokuhweba bese eqala ekukhiqizweni izicathulo ezingabizi futhi ethandwa.
"Mascotte" - kukhona imikhiqizo, okuyinto ziyasetshenziswa ngempumelelo emazweni amaningi Melika, eYurophu nase-phezu expanses we Russian Federation. Ukukhiqizwa Mascotte e China. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi izimpahla zavezwa le lebula, izinga yabo iyenziwa njalo futhi kuyinto isiphakamiso esihle kakhulu abathengi.
Fashion brand Amathrendi
Le nkampani "La Mascotte» (Mascotte) izicathulo unyaka ngamunye ngobuningi. Ngakho, unyaka ngamunye ukhiqiza emhlabeni onobuhle ayizinkulungwane ezimbili ezahlukene izicathulo, nezimbadada, amabhuzu, amateki nokunye. Brand has ezihlukahlukene izingcaphuno wesitayela kusukela zakudala futhi azibamba kokuqeda design intsha elikhanyayo. Le nkampani ngokukhethekile hhayi kuphela kudalwa zabesifazane kanye izicathulo zabesilisa, kodwa kubuye kutfutfukise amaqoqo izingane nentsha. Lolu chungechunge libizwa Mascotte Junior. Zonke umugqa ilebula basonta phakathi intengo ingxenye futhi Site nabantu zizwakale kahle abakwazisayo ubuntu babo siqu.
Minyaka yonke "La Mascotte" izicathulo ukhiqiza amaqoqo ezine: ezimbili eziyinhloko futhi ezimbili eziphakathi. Isigaba sokuqala sihlanganisa pair of "Spring-Summer" futhi "Autumn-Winter". Iqembu lesibili - "Christmas" futhi "Cruise" iqoqo. Zonke imikhiqizo esigabeni abafanele wabulawelwa uhla efanayo, kwakumelela incazelo kokuvamile athwala umqondo owodwa.
Ukunikezwa kusukela Mascotte kwabesifazane
Yini i-izintokazi enhle "Mascotte"? Shoes kwabesifazane akhona kwezemidlalo izitayela zakudala, kanye uchungechunge ngabanye Glamour, Disko enikeziwe, "Muley" futhi "kamancha". Njengoba kushiwo ngenhla, ukudala namabhuzu brand kuphela isebenzisa Suede yemvelo kanye lesikhumba. Ezisetshenzisiwe eliphezulu izesekeli azigugi futhi sigcwalisa kahle klamo pair ngamunye.
Zabesifazane zokusebenza kule ilebula presents izigqoko, lesikhumba izikhwama, ubucwebe, zemali, scarves, izibuko, amabhande, abanikazi ikhadi lebhizinisi, amagilavu kanye scarves. Ukuze izikhwama zabo Mascotte Abaklami ukhethe izinto zemvelo kanye hlobo lokucubungula njengoba velvet, Sweden, lesikhumba, lesikhumba patent. Ngezinye izikhathi asetshenziswa exotic lesikhumba, PU, Amatjhila noboya.
Ukuthuthukiswa for besilisa
Le nkampani "Mascotte" izicathulo ngoba amadoda futhi inikeza uhlu olubanzi. Ngasinye iqoqo ngabanye - kungcono ubuntu kanye okwakhe imodeli. Abaklami yenkampani hhayi kuphela abafuna athobele izinkomba zomhlaba fashion, kodwa futhi uzame ukwenza kube izinguquko zabo. Amamodeli abobulili namandla kwenziwa i ezintsha impahla iphepha-touch, ukudala nomuzwa iphepha ngayinyomfoza ngayiphosa. derby Classic futhi brogues kuthiwa kwahambisana okusezingeni eliphezulu iraba iyodwa futhi izintambo zezicathulo.
wonke Ulayini izicathulo zabesilisa kuyinto banganhlanhlatsi ezahlukene futhi ukuzibamba, kodwa nenqwaba yonkulunkulu kuhle uchungechunge lemibhangqwana zesifazane.
Abasebenzisi imikhiqizo Mascotte
"Mascotte" kuphela ukubuyekezwa engcono. imikhiqizo Brand wanelisa zonke abakwaziyo ukuyisebenzisa. abesifazane abaningi bathi ukuthenga izicathulo hhayi kuphela, kodwa futhi ezihlukahlukene izesekeli lokhu brand. Bonke ngendlela emangalisayo emnandi. kunjalo futhi ngoba 'ukugxiliswa' mikhiqizo kanye abashade nabo labatfola amabhande izicathulo. Amadoda ziyajabula bese batusa imikhiqizo futhi abangane bakho.
Enye intombazane yathi ukuthi eminyakeni embalwa egqoke Suede amabhuzu ilebula IsiZulu ku High Heels. Bathi imilenze isithende okunjalo akukhona okhathele, nayo Suede libukeka entsha ngisho nangemva zonyaka ezimbili noma ezintathu bafake.
Akhonza ukugqoka Mascotte, futhi akazange ngempela bayakwazisa ngazimbili ezinjalo. Abaningi babo babe ukuhamba kulezi izicathulo usuku lonke. Kodwa ngisho nangemva 8-10 amahora egqoke imilenze musa ubuhlungu futhi akazange sizibonise iphunga ezingemnandi kusihlwa. Ukwahlulela ukubuyekezwa, ikhwalithi kanye nomklamo imikhiqizo bayahlonishwa wonke abathengi, abathenga imikhiqizo brand.
Beading kanye lobuhlalu namasongo
Kuthiwani uma izinso chilled? Izimpawu kanye Ukwelashwa
Umsebenzi ikhokhwe kakhulu kakhulu e Moscow (2014). Kakhulu ikhokhwe umsebenzi eMoscow: uhlu
Indlela anodized aluminium